ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: “အခြေခံဥပဒေကို မပြင်ရင် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်မယ်” ဆိုတဲ့ SNLD ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် RFA အင်တာဗျူး (အသံ)
“အခြေခံဥပဒေကို မပြင်ရင် ရွေးကောက်ပွဲကို သပိတ်မှောက်မယ်” ဆိုတဲ့ SNLD ပါတီ ဥက္ကဌ ဦးခွန်ထွန်းဦးနှင့် RFA အင်တာဗျူး (အသံ)
အချုပ်အချာအာဏာကိုပြည်သူတွေ ပိုင်တယ် ၊ ပြည်သူတွေလက်ထဲ ထည်.ရမယ်.ကာလ ရောက်ပြီလို.
မယူဆသေးသရွေ. ဖွဲ.စည်းပုံပြင်ဖို. ၊ တရားမျှတတဲ.ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ပေးဖို. ခုလို တွန်.ဆုတ်ဆုတ် ဖြစ်နေအုန်းမှာ ။